Sirni Awwaalcha Atleet Miruuts Yifxar, Finfinnee
Itiyoopiyaan goota olompikii fi fiigicha fageenya giddu galeessaan injifannoo kan gonfate kaleessa geggeessitee jirti. Bara 1972 Olompikii tokkicha irratti meedaalii warqee lama ennaa inni argate lammiiwwan Itiyoopiyaa gamas turanii fi fageenya irraa fiigicha sana hordofaa turan gammachuun isaanii daangaa dhabee imimmaan gammachuu roobsaniiru.
Olompikii Mookoo irratti jila Itiyoopiyaa kan hooggananii fi akkuma Miruuts injifatee galeen miilla isaatti kufanii kan dhungatan keessaa tokko kan ta’an obbo Teferraa akka jedhanittiYeroo sana lammiiwwan Itiyoopiyaa Moskoo turre boonyee turre.
Isa qofaa utuu hin taane martinuun keenya boonyee turre. Ol utaalaa dhiichisaa turre. Alaabaan keenya ol ba’ee faaruun keenya ennaa faarfatamu gammaduu keenya irraan kan ka’e dubbachuu illee dadhabne jedhan.
Injifannoon Moscow sun dargaggoota hedduu dadammaqseera. Badhaasi warqee sun lamaan biyyattii kanaaf warqeewwan hedduu ka biroo hawatanii jiran. Sanaan dadammaqiinsa argatanii kara atleetiksiitti kan seenanii fi injifatanii kan beekaman keessaa tokko Haayilee G/Sillaasee tokko.
Prezidaantiin Federeeshinii atleetiksii Itiyoopiyaa kan ta’e Haaylee G/Sillaasee sirna awwaalcha Miruuts irratti ennaa dubbatu Moscown maraafuu bakka ka’umsaa ta’uu ishee tuqee jira.
Sirna Awwaalcha Atleet Miruuts Yifxar